OneLocal: Suite yeMakambani Ekushandisa Ekushambadzira Emuno Mabhizinesi | Martech Zone
OneLocal suite yezvishandiso zvekushambadzira zvakagadzirirwa mabhizinesi emuno kuti vawane akawanda vatengi kufamba-mukati, kutumira, uye - pakupedzisira - kukura mari. Ipuratifomu yakanangana nechero mhando yekambani yebasa renharaunda, inotora mota, hutano, hutano, mabasa epamba, inishuwarenzi, zvivakwa, saloni, spa, kana maindasitiri ekutengesa. OneLocal inopa suite yekukwezva, kuchengetedza, uye kusimudzira bhizinesi rako diki, nematurusi echikamu chimwe nechimwe cherwendo rwevatengi.
OneLocal's gore-based zvishandiso zvinokubatsira iwe kuti upe zvakanakisa-mu-kirasi zviitiko, zvichikubatanidza iwe nevatengi mune zvine chinangwa nzira. Chishandiso chimwe nechimwe chakagadzirirwa kushanda zvakazvimiririra, asi kana chakabatana pamwechete, vanopa yakazara-otomatiki kutyaira kukura kwemari & kukuchengetedza nguva. Iko hakuna zvivakwa kana nguva yekumisikidza inodikanwa, ingo pinda uye tarisa OneLocal basa kune rako bhizinesi.
Iyo OneLocal Suite yezvigadzirwa inosanganisira:
OngororaEdge - unganidza uye nekuisa mukati mako mhinduro yemutengi uye gadzira wongororo yepamhepo.
ReferralMagic - shandisa kushambadzira kweshoko-remuromo, kudzikisa kushambadzira mari uye kukura mari.
ContactHub - bhizinesi diki CRM kuti ikubatsire kuvaka, kubata, uye kuita mari kune vako vaunotaura.
SmartRequest - ecommerce chikuva kuti vatengi vatenge zvakananga kubva kune yako webhusaiti.
KuvimbikaPerks - chirongwa chekuvimbika kwevatengi kuti chikubatsire zvirinani kuchengetedza vatengi uye kutyaira yakawanda mari kubva kwavari.
Tags: motokaritora wongororocontacthubCRMmutengi kuvimbika chikuvamutengi ongororo chikuvakuongorora kwevatengiecommerceutanomabasa epambainishuwarenzizvomunharaundakushambadzira kwemunoyemunharaunda yekushambadzira chikuvakuvimbikaonelocalonline zvikumbiroonline basa chikumbiromushakutumira chikuvareferralmagiczvokusumwachitorowongororosalonbhizinesi diki crmSpaWellness
SEO: 5 Maitiro Ekugadzirisa eGoogle Organic Kutsvaga